Jiilka soosocda ee iPad Mini wuxuu soo bandhigi doonaa shaashad yar-yar oo LED ah | Wararka IPhone
Waxaan ka hadleynay warar xan ah in ka badan hal sano oo tilmaamaya dib u qaabeyn dhameystiran oo ah iPad Mini, naqshad dhacday laakiin wali waxay bixisaa taageerada qalinka Apple ee jiilkiisa 5aad kaasoo hadda iib ah.
Haddii aan iska indhatirno xanta, iPad Mini-ka cusub wuxuu ballaarin karaa cabirka shaashadda oo hadda ah 7 inji illaa 8,5 ama laga yaabee 9 inji, yareynta dhaldhalaalka si loo ilaaliyo cabbirka. Aqoonsiga Taabashadu wuxuu u wareegi doonaa dhinaca sida iPad Air oo wuxuu qaadan doonaa a Isku xirka USB-C.
Laakiin sidoo kale, haddii aan fiiro gaar ah u yeelano Digitimes, ugubnimada ugu muhiimsan ee qarnigan lixaad ee iPad Mini wuxuu noqon doonaa shaashadda, shaashad qaadan doonaa tiknoolajiyad yar-yar.
Sida laga soo xigtay warbaahintan, soo-saaraha BLU Radiant wuxuu bilaabi doonaa inuu soo diro shaashado yar-yar oo LED ah rubuca saddexaad ee 2021, shaashadaha loo qoondeeyay maahan oo keliya jiilka xiga ee iPad Mini, laakiin sidoo kale loogu talagalay MacBook PRo ee soo socota ee Apple waxay qorsheeyeen inay ka bilaabaan suuqa rubucii ugu dambeeyay ee sanadkan.
Waa in la xusuusnaadaa in shaashadaha leh teknoolojiyada yar-yar ee LED-ka ay bixiyaan a dhalaalka sare, kala duwanaanta wanaagsan iyo madow qoto dheer, madow oo aan soo bandhigin tayo la mid ah gudiga OLED.
Mark Gurman wuxuu horey u sheegay in iPad mini-ka cusub lagu dhawaaqi doono dabayaaqada sanadkaan iyo soo-saarista laydhka yar-yar ee laxiriira bilaabmi doonaa saddexda bilood ee saddexaad sanadka sidaasna ku xaqiijinaya macluumaadka Digitimes.
Laga soo bilaabo 9to5Mac, waxay dhawaan sheegteen in iPad mini-ka soo socda uu soo muuqan doono isla A15 chip sida jiilka soo socda iPhone 13, waxaa ku jiri doona a Xidhiidhiyaha xariirka si sahal ah loogu xiro teebabka iswaafajiya. Kuwan hagaajinta kuwan waa macquul in Apple sidoo kale ay kordhiso tirada dadka ku hadla qalabkan, sida uu sheegay Jon Prosser.
Waxa cad in eQiimaha qaabkani isku mid ma noqon doono marka loo eego iPad Mini 5, aalad ka gudubta cabirkeedu aad buu qaali u yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Jiilka soo socda ee iPad Mini wuxuu soo bandhigi doonaa muuqaalka mini-LED
AirPods 3 wuxuu imaan lahaa iPhone-ka cusub bisha Sebtember
Apple waxay yareyneysaa tirada iphone-yada iyo ipad-yada taageera Apple Music codka maqalka